Mpamatsy milina fampiroboroboana volo mora vidy mpamatsy sy orinasa | YiZheng
Ny milina cooler drum dia tokony hamboarina sy ampiasaina amin'ny tsipika famokarana zezika organika na tsipika famokarana zezika NPK hamita ny fizotry ny famokarana zezika feno. nyMilina Pillets Cooling Machine mazàna manaraka ny fizotra fanamainana mba hampihenana ny hamandoana sy hampitomboana ny tanjaka sombiny na dia hampihena ny maripana sombiny aza.
Inona no milina fanamainana Pellets Pellets?
ny Milina Pillets Cooling Machine dia natao hampihenana ny fahalotoan'ny rivotra mangatsiaka sy hanatsarana ny tontolon'ny asa. Ny fampiasana ny milina cooler drum dia ny hanafohezana ny fizotry ny famokarana zezika. Ny fampifanarahana amin'ny masinina fanamainana dia afaka manatsara ny tahan'ny fihenan-tsasatra, tsy mampihena ny hamafin'ny asa fotsiny, fa manala ny hamandoana bebe kokoa ary mampihena ny maripanan'ny granules zezika. ny milina mangatsiaka mihodina azo ampiasaina amin'ny fampihenana ny vovo-dronono hafa. Ny fitaovana dia manana firafitra mifangaro, fahombiazan'ny fampangatsiahana avo lenta, fampisehoana azo antoka ary fanamafisana matanjaka.
Fitsipika momba ny asa amin'ny milina Pellets Cooler Pupuk
Milina Pillets Cooling Machine manangana fomba fifanakalozana hafanana amin'ny fitaovana mangatsiatsiaka. Izy io dia miaraka amin'ny elatra fikosoham-bolo vy vita amin'ny vy eo alohan'ny fantsom-panafody sy ny lovia fananganana amin'ny faran'ny varingarina, ary ny rafitra fantsom-panazavana fanampiny dia tokony hapetraka miaraka amin'ny milina famafana. Rehefa mihodina tsy tapaka ny varingarina, ny takelaka manainga ao anatiny dia manainga hatrany hatrany ireo granules zezika miakatra sy midina mba hifandraisana tanteraka amin'ny rivotra mangatsiaka amin'ny fifanakalozana hafanana. Ny zezika granular dia haidina 40 ° C alohan'ny hamoahana azy.
Endri-javatra amin'ny milina Pellets Cooler Machine
1.Ny varingarina an'ny Milina Pillets mangatsiaka milinadia fantsom-boaloboka matevina 14mm matevina mifatotra, izay manana tombony amin'ny fifangaroana avo sy fiasan'ny vy. Ny hatevin'ny takelaka manainga dia 5mm.
2. Ny peratra peratra, ny fantsom-boaloboka ary ny bracket dia vy avokoa.
3. Safidio ny masontsivana miasa mety mba handanjalanjana ny "fahanana sy ny rivotra", amin'izay dia manatsara be ny fahombiazan'ny fifanakalozana ny Milina Pillets Cooling Machine ary mampihena 30-50% ny fanjifana angovo.
4. Ny varingarina dia mandray fantsom-boaloboka, ary ny ozinina vy dia mampiasa ny takelaka mitovy hampidirina amina bobin-kazo hisorohana ny fiovana amin'ny dingana manaraka; Ny fitaterana mety dia mizara roa, ary ny fifandraisana flange eo anelanelan'ny fanodinana volamena dia miantoka ny fampidirana henjana.
Zezika Pellets Cooler Machine Asehoy ny horonan-tsary
Zezika Pellets Cooler Machine Model Selection
Misy karazany maro ny Milina Pillets Cooling Machine, izay azo fidina mifanaraka amin'ny tena filàna, na namboarina. Ny masontsivana ara-teknika lehibe dia aseho amin'ity tabilao manaraka ity ：
Teo aloha: Masinina fanamainana varingarin'ny Rotary tokana amin'ny fanodinana zezika
Manaraka: Masinina mifono zezika rotary
Fampidirana Inona no ilana ny milina mpanamboatra fehikibo vita amin'ny fehikibo? Ny Machine Rubber Belt Conveyor dia ampiasaina amin'ny famonosana, famoahana ary famoahana ny entana ao amin'ny wharf sy trano fanatobiana entana. Izy io dia manana tombony amin'ny firafitra matevina, fandidiana tsotra, hetsika mety, fisehoana tsara tarehy. Milina fehikibo vita amin'ny fehikibo dia mety amin'ny ...
Fampidirana Inona ilay masinina mpamaky zezika roa? Ny Machine Two-Stage Fertilizer Crusher dia crusher karazana vaovao izay afaka manapotika mora foana ny vavonin'ny vainafo, shale, cinder ary fitaovana hafa aorian'ny famotopotorana maharitra sy famolavolan'ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ity milina ity dia mety amin'ny fanorotoroana ny vady manta ...
Double-axe Chain Crusher Machine zezika Cr ...
Fampidirana Inona no masinina mpamaky ranjo rojom-bary? Ny Double-axle Chain Crusher Machine Fertilizer Crusher dia tsy ampiasaina fotsiny hanapotehana ny vongan-pamokarana zezika biolojika, fa be mpampiasa koa amin'ny akora simika, fitaovana fananganana, fitrandrahana ary indostria hafa, amin'ny alàlan'ny lozam-pifamoivoizana mahery vaika MoCar. Ny m ...
Fampidirana Inona no atao hoe Separator-tsiranoka matevina mihidy? Izy io dia fitaovana fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny tsy fahampian-tsiranoka amin'ny zezika akoho amam-borona. Izy io dia afaka manasaraka ny rano maloto sy fotaka amin'ny fakon'ny biby fiompy ho zezika organika misy zezika sy zezika voajanahary. Ny zezika biolojika ranoka dia azo ampiasaina ho an'ny vokatra ...